Wasiirkii hore ee wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta Soomaaliya oo ku tilmaamay warkii Dubbe wax lala yaabo. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Wasiirkii hore ee wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta Soomaaliya oo ku tilmaamay warkii...
Wasiirkii hore ee wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta Soomaaliya oo ku tilmaamay warkii Dubbe wax lala yaabo.
1.	Sanadkii 1991 waxay qabatay shirarkii dib-u-heshiisiinta ee Jabuuti 1&2, laguna soo dhisay Dawlad KMG ah.
2.	Sanadkii 2000 waxay noo qabteen shirkii Carta ee dhidibada loogu taagay dawladnimada aan maanta haysanno.
3.	Sanadkii 2008 waxay marti geliyeen kulamadii dib-u-heshiisiinta ee Xukuumaddii KMG iyo Isbahaysigii Dib-u-Xoreynta, kolkaasoo lagu soo dhisay dowlad wadaag ah.
4.	Gobolka Hiiraan markii Shabab loo loogay Jabuuti waa tii wiilasheeda & gabdhaheeda usoo dirtay, kana qeyb qaadatay nabadgelyada iyo horumarka dhammaan magalooyinka gobolka Hiiraan. Reer Hiiraanna waxay ugu magac dareen Hiil- Walaal.
5.	Jabuuti waxay u istaagtay inay martigeliso ganacsatadeena, isla markaana u fududeysay sidii ay ku heli lahaayeen baasaboorro ay adduunka uga ganacsadaan, iyadoo ganacsatadaasi ay yihiin dadka halbowlaha u ah dhaqaalaha dalkeena.
Previous articleWasiirka Arimaha Dibada Turkiga Mevlut Cavusoglu oo shalay sheegay in Turkiga.
Next articleWasiirka Maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo sheegay in dowladda ay soo food-saartay dhaqaale xumadii ugu darnayd.
Danaha guud ee ka dhexeeya Turkiga iyo Mareykanka ayaa ka miisaan culus waxyaabaha ay isku khilaafsan yihiin, Ankara-na ay dooneysaa in la wanaajiyo iskaashiga...